?Waa been in Qardho mudaharaad ka dhacay, shacabka Puntlandna waa dad hamuun u qaba hannaanka geeddi-socodka dimuqraadiyadda Puntland? Shimbiralaaye. – Radio Daljir
?Waa been in Qardho mudaharaad ka dhacay, shacabka Puntlandna waa dad hamuun u qaba hannaanka geeddi-socodka dimuqraadiyadda Puntland? Shimbiralaaye.
Seteembar 24, 2012 1:01 g 0
Garowe, Sept 24 – Guddoomiyaha guddiga doorashada Puntland Maxamed Xassan Bare (Shimbiralaaye) oo waraysi gaar ah siiyay Radio Daljir ayaa? beeniyay mudaharaadyo looga soo horjeedo hawlaha dimuqraadiyadda oo ka dhacay dhwaan degmada Qardho ee gobolka Karkaar.
Guddoomiye Shimbiralaaye ayaa sheegay in inuu kusugan-yahay degmada Bandarbayla ee gobolka Barri, waxaa uu sheegay inay si wanaagsan u soo dhaweena dadka deegaanka, isla markaana ay kulamo ku saabsan wacyigalinta arrimaha dimuqraadiyadda la qaateen waxgaradka iyo maamulka Qardho, Waaciye, iyo Bandarbayla oo ay xilligaan ku suganyihiin.
Mar aan wax ka waydiinay muranka ka taagan xilliga dawladda Puntland ayuu ku jawaabay ?Dastuurka dawladda Puntland waxaa ku qoran muddo 5 sano ah, waxaana Dastuurka ansixiyay ergooyinka laga soo xulay dhammaanba gobollada Puntland, marka cidda xilligaan arrintaasi muranka galinaysa waa cid kasoo horjeeda jiritaanka Puntland?.
Radio Daljir oo guddoomiyaha waydiisay degmooyinka guddigu uu ka booqanayo gobolka Sool oo muran iyo isqab-qabsi maamulo kale duwan ah ka jiro ayuu arrintaasi kaga jawaabay ?Gobolka Sool waxaa uu ka mid-yahay gobollada Puntland, waan tagi-doonaa haddii rabbi-idmo?.
Socdaallada ay guddiga doorashooyinka Puntland ku marayaan dhammaan degmooyinka Puntland ayaa kusoo beegmaya xilli ay jiraan aragti-siyaasadeed oo qaba in dawladda Dr C/raxaan Faroole waqtigeedu inuu gabaabis-yahay, isla markaana mudadeeda ku cayiman-tahay 5 sano oo qura.
Gudoomiyaha Mudug Maxamed Yuusuf Jaamac oo ka warbixiyay hawl-galadii ugu danbeeyay ee ay ka fuliyeen gobolka.
Madaxda dhaqanka ee gobolada Jubbooyinka iyo Gedo oo si kulul u cambaareeyay fal shalay ciidamo Kenyaati ah dad ay ku dileen deegaan hoos taga Kismaayo.